Shina: Nahazo onitra ireo mpiserasera nogadraina 150 andro · Global Voices teny Malagasy
Shina: Nahazo onitra ireo mpiserasera nogadraina 150 andro
Voadika ny 02 Febroary 2019 8:14 GMT
Notazonin'ny polisy i Duan Lei, mpiserasera Shandong tamin'ny febroary 2009 noho ny fiampangana azy ho “manala-baraka” ny sekreteran'ny antoko eo an-toerana, Guo Feng, ao an-tanànan'i Zhuang Zai.
Araka ny tatitry ny Xinhua, niampanga an'i Guo Feng tamin'ny kolikoly sy fivarotana zava-mahadomelina ary fivarotan-tena tao amin'ny KTV i Duan. Nihevitra ny mpiraki-kevitry ny vahoaka ao amin'ny Cao County fa niteraka “fiantraikany ratsy” sy “fikorontanana ara-tsosialy” ny lahatsoratra navoakan'i Duan ka nametraka fitoriana azy tamin'ny 3 Jolay izy.
Nanambara ny mpisolovava an'i Duan Lei fa tamin'ireo lahatsoratra enina nosoratan'i Duan navoaka antserasera, nisy nijery in-79 ny telo tamin'izy ireo raha tsy dia be mpijery kosa ny hafa, tsy mitombona araka izany ny fiampangana momba ny “fiantraikany ratsy” sy ny “fikorontanana ara-tsosialy”. Niakatra fitsarana tsy nisy nahazo nanatrika tamin'ny 17 Jolay i Duan. Nesorin'ny mpiraki-kevitry ny vahoaka ny fitoriana noho ny tsy fisian'ny porofo ary navotsotra tamin'ny fitazonana azy 150 andro i Duan Lei.
Nilaza ny vaovao Xinhua tamin'ny 31 aogositra fa nahazo onitra 16 arivo RMB (manodidina ny 2.200 dolara) i Duan noho ny fitazonana azy naharitra 150 andro. Ny mpiraki-kevitry ny vahoaka nandoa (11.798 yuan) ary ny polisy eo an-toerana nandoa (5.000 yuan).